Home Wararka Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxday qaraxii EX-Control
Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxday qaraxii EX-Control
Sida ay sheegayaan warar dheeraad ah oo ka imaanaya goobta qaraxa ka dhacay ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhashay qarax. Qaraxaan ayaa saakay ka dhacay agagaarka isgoyska Ex-Control Afgooye ee duleedka Muqidhsho, kaas oo geystay khasaare kala duwan.
Dhanka kale wararka ayaa sheegaya in qaraxan loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kaas oo lagu dhuftay darbi ka mid ah dhismaha xerada ciidanka Asluubta Soomaaliyeed oo ku taalla halkaasi, waxaana jugta qaraxa si weyn looga maqlay qeybo ka mida caasimada. Ilo wareedyo lagu kasloon-yahay ayaa Muqdisho Online u sheegay in qaraxa uu dhacay, xilli ay saf-dheer ku jireen ciidamada Asluubta ee ka howl-gala xeradaasi.
Waxaa la sheegayaa in qorshuhu ahaa in gaariga qaraxa ku jiray uu gudaha u galo xerada ciidamada Asluubta, balse uu soo dhaafi waayay darbiga oo adkaa, sida uu sheegay sarkaal tirsan dowladda. Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in qaraxan uu geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac, walow aan la shaacin tiro ahaan inta uu gaarsiisan yahay. Ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan qaraxaasi, balse waxaa haatan socda baaritaano dheeraad ah.